यसरी लुट्यो मेरो जवानी - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » यसरी लुट्यो मेरो जवानी
बल्लतल्ल साइटमा पुग्यौं । केहीबेर उसले स्टाफहरुलाई अर्थ्यायो । अनि इन्जिनियरलाई हेटौंडा जाउँ भन्यो । मलाई डर लाग्न थाल्यो । कतै उसले मलाई पनि जाउँ भन्ने त होइन ?नभन्दै जेको डर थियो, त्यही भयो । ‘उसले भन्यो कबिता, तिमी पनि हिडँ, तिमीलाई अरु काम पनि जिम्मा लगाउनु छ ।’ अफिसको काम भनेपछि जान्न भन्नु पनि कसरी ? जाउँ त उसले फेरि मलाई खेलौना बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता । रातोमाटे पुगेपछि इन्जिनियर उत्रियो । मलाई अब भने पक्का भयो, आज पनि मेरो शरीर लुटिन्छ भन्नेमा । बाटोमा केही कुरा नभएपनि इन्जिनियर उत्रिएपछि भने उसले मलाई भन्यो, ‘अस्तिकै ठाउँमा जाउँ, खाजा खाउँ अनि तिमी नयाँ साइट जाऊ ।’
मैले चालकको अगाडी सबै कुरा भन्न उचित ठानिनँ । आखिर यसले त्यही कोठामा लैजाला, बरु एक्लै योसँग आज स्पष्ट कुरा भन्छु भन्ने सोचेर मैले मुन्टो हल्लाएर उसका कुरालाई स्वीकृती जनाएँ ।होटलमा पुगेपछि उसले चालकलाई मोटरमा तेल भर्न र खाजा खान भनेर पैसा दियो । अनि भन्यो, ‘३ बजेतिर आइपुग्नु ।’
अचानक उसले मलाई खाटमा पल्टायो र ममाथि घोप्टियो । मलाई रुनमात्र आयो, केही बोल्नै सकिनँ । भक्कानो फुटेर आयो, अनि आँशु झार्दै रोएँ । उ मेरो शरीरमा आफ्नो शरीर पुरै सुताएर मेरो अनुहार हेर्दै थियो । म भने उप्रति रुदैँ दयाको भिख मागिरहेकी थिएँ । तर उसले हात सार्न थाल्यो, मेरा स्तनतिर ल्याउन । मैले आफ्ना दुबै स्तनलाई हत्केलाले ढाकेँ । उसले मेरा दुबै हात आफ्नो दाहिने हातले समात्यो र मेरा स्तनमाथि मुख दल्यो, मानौं त्यो कुनै माटोको ढिस्को हो, त्यसलाई ऊ मुख दलेरै भत्काउन चाहन्छ । उसको मुहारको घर्षणले मलाई दुखाइरहेको थियो, तर पनि म सहन बाध्य थिए ।एक पटक त उसले आफ्नो दाँतले मेरो देब्रे स्तन टोक्यो । मैले ‘ऐया’ भनेँ । उसले ढाडस पार्दै भन्यो दुख्यो, ? ‘अँ’ मेरो जवाफ थियो ।
‘मलाई मजा चाहिएको छैन ,’ मेरो जवाफ थियो ।‘ओहो तिमी त जहिल्यै पनि भर्जिन कै जस्तो कुरा गर्र्छौ बा ।’ उसले यति नभन्दै मलाई खाटमा पल्टायो । अनि ममाथि मडारिन थाल्यो । मेरा खुट्टालाई आफ्ना खुट्टाले बाँधेर मलाई बेस्सरी थिचिरहेको थियो । मेरा स्तनमा घरीघरी हात ल्याउँथ्यो र निचोर्थ्यो । अचानक ऊ घुँडा टेकेर बस्यो । अनि मलाई एक नजरले हेर्यो । ऊ जोशले जागिसकेको राक्षस जस्तो भइसकेको थियो । उसको अनुहार रातो भइसकेको थियो । फटाफट उसले मेरा लुगा खोल्दै भुइँतिर फाल्न थाल्यो । मलाई नांगो बनाउन उसलाई एक मिनेट पनि लागेन होला ।
अनि मेरो खुट्टा फट्याएर पुती नियाँल्न थाल्यो । हातले केही बेर चलायो । मलाई काउकुती लाग्यो । हत्केलाले पुती निकैबेर रगड्यो । कहिले भुत्ला चलाउने, कहिले पुतीको डिलमा औला दल्ने, कहिले औंला पसाउन खोज्ने गर्दै निकैबेर उसले खेलायो । म आँखा चिम्लिएर उसका स्मर्शलाई स्वीकार्दै गएँ । एकछिन ऊ शान्त भएझै लाग्यो । तर मैले आँखा खोलिनँ । केहीबेरमा उसले मेरा दुबै हात समात्यो । त्यतिन्जेल मेरो ओठतिर उसले लाडो ल्याइपुर्याइसकेको रहेछ । मैले आँखा खोलेँ । लमतन्न उसको लाडो पसारिएको थियो । अनि उसले मेरो ओठमा दल्न थाल्यो । मलाई घिन लाग्यो र मुन्टो अर्कातिर फर्काएँ । मेरो चिउँडो समातेर उसले लाडो दल्न थाल्यो । ‘यो के गरेको ?’ मैले भनेँ । ‘यसलाई माया गर न लाटी ।’ उसले छिल्लीदैं भन्यो ।‘मैले तपाइँ यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ, मलाई छोड्दिनुस्,’ मैले भनेँ । तर ऊ किन मान्थ्यो । मेरा स्तनलाई लाडोले घोच्न थाल्यो । मलाई यताउता पल्टाउँदै जिउभरी लाडो दल्यो । मलाई सिकसिको लागिरहेको थियो । एक दुइ पटक त मैले हातले समातेरै उसको लाडो हटाउने प्रयास पनि गरेँ । तर एकतिरबाट हटाउन नपाउँदै उसले अर्कोतिर दल्न भ्याइसकेको हुन्थ्यो । निकैबेर यो क्रम चल्यो ।
केही बेरमा उसले भन्यो, ‘बाहिर झार्छ भनेको त सकिएन ।’ उसको कुराले मलाई डर लाग्यो । सोधेँ, ‘के भयो ?’ उसले भन्यो, ‘माल भित्रै झर्यो ।’‘ममी…’ म भयभीत भएँ । अनि रुन थालेँ । उसले मरो केश सुम्सुम्याउँदै भन्यो, ‘धन्दा नमान, केही पनि हुँदैन, बच्चा नबस्न पनि सक्छ, बस्यो भने म छँदैछु ।’ केहीबेर पछि उसले मेरा स्तन फेरि माड्न थाल्यो । मैले भनेँ, ‘लु अब भयो, म जान्छु ।’
उसले मलाई धम्क्याउन थाल्यो, ‘फेरि भोलि केही भयो भने मलाई नभन्नु नि ।’ म झन डराएँ । अब त उसको कुरा मान्नुमा नै मेरो भलाई थियो । अनि उसले मेरो पुती सुम्सुम्यायो । केही क्षणमै उ यसरी जुर्मुरायो कि मलाई कर्यापकुरुप पार्न थाल्यो । उसले मेरो शरीरको जताततै चुम्बन गर्यो । अनि लाडोलाई फेरि हुल्न थाल्यो । यो पटक पनि उही रफ्तारमा दनादन पेल्यो । मलाई अब पीडा हुन थालिसकेको थियो । ‘ऐया.. ऐया..’ भनेर भए पनि मैले उसलाई निकैबेर साथ दिएँ । मेरा शरीर कुनै प्रतिक्रिया नै जनाउन नसक्ने गरी थाकिसकेको थियो । शिथिल भएर उसका प्रहारलाई सामना गर्नुबाहेक म सँग कुनै विकल्प नै थिएन । भत्भती पोल्न थाल्यो । तर पनि उसले छोडेन । मैले निकै बेर सहेपछि बल्ल ऊ शान्त भयो । Tweet
Nepali Sex Story लाहुरेको बुढी चिकेको कथा	Dewar Sanga Chikda – Nepali Sex Story	मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो ।	About The Author